ပန်ဒိုရာ: Mythical Moments
တခုပဲ ... ပရိပတ္တိတရား ဆိုတာ မရှိဘူးထင်တယ်။
ပရိယတ္တိလား ပဋိပတ္တိလား တခုခုပဲ အရီးပန်။
ပရိယတ္တိက သင်ကြားတာ၊ ပဋိပတ္တိက ကျင့်ကြံအားထုတ်တာ ဆိုတော့ကာ meditation ကို ဘာသာပြန်တာဆိုရင် ပဋိပတ္တိပဲ ဖြစ်မယ် ထင်တယ်။
နောက်ပြီး ပြောလက်စနဲ့ ဆက်ပြောရရင် အတ္ထုပ္ပတ္တိ စာလုံးပေါင်းလေးလဲ ပြောပါရစေအုံး။
အခိုက်အတန့် လေး တွေးနေမိတယ်... ကိုပန်ဆိုတာ ပန်ဒိုရီလား ပန်...
မမေ ရေ. ကျေးဇူး.. ပြင်လိုက်ပြီ
မတန်ခူး ကိုပန်ဆိုတာ ပန်ဒိုရီအပြင် ဘယ်သူဖြစ်နိုင်ဦးမှာလဲ.. လို့း)
Meaningwhile, P & P make magical...
Meaningful / Marvelous / Miraculous poem... :)
အော..ကိုပန်က.. မပန်းကို အမှီ လိုက်နေ တာကိုး..း)
မပန်ရေ ဖတ်သွားတယ်။ m တွေနဲ့ ရေးထားတဲ့ကဗျာကော မပန်ရဲ့ ဘာသာပြန်လေးပါ သေချာဖတ်သွားတယ်။း)
နောက်ဆုံးပိုဒ်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ မပန်နဲ့ကိုပန်..